Gungwa reYero: hunhu, mabviro, zvipenyu zvakasiyana uye hupfumi | Network Meteorology
ChiGerman Portillo | 14/04/2021 10:29 | Ciencia
Chikamu chekuchamhembe kweEast China Sea chinozivikanwa se yero gungwa. Iri igungwa rakakura raigara nzvimbo ingangoita 417 km². Iri pakati penyika huru China neKorea peninsula. Iro zita rinouya kubva kune jecha zvikamu zvinopa mvura iyo ruvara rwakafanana chaizvo neyero. Ndirwo rwizi rweyero rinotarisira kudyisa iri gungwa nekuripa iri vara. Rwizi rweyero rwunozivikanwa seHuang iye. Iyo inozivikanwa zvakare munharaunda, muSouth Korea, seWest Sea.
Munyaya ino isu tichaenda kukuudza nezvese hunhu, kuumbwa uye mabviro eGungwa reYero nerwizi rwayo.
2 Oiri muGungwa Reyero
3 Wepamusoro mutero weGungwa Dzvuku
4 Kudzidziswa uye zvipenyu zvakasiyana
Gungwa Dzvuku igungwa risina kudzika rine chete yakadzika kudzika kwemamita 105. Iyo ine hombe bay inoumba pasi pegungwa uye inonzi Gungwa reBohai. Iri bay ndipo panodururwa rwizi rweYero. Rwizi rweYero ndiro sosi huru yemvura yegungwa. Rwizi urwu rwakadururwa mushure mekuyambuka dunhu reShandong nemuzinda waro, Jinan, pamwe nerwizi rweHai runoyambuka Beijing neTianjin.
Zita regungwa iri haribve murwizi, asi kubva pauwandu hwe quartz jecha inokwenenzvera kusvika kumvura zhinji uye nekuipa iri rakati wandei ruvara. Ichi ndicho chikonzero nei iine zita reGungwa Dzvuku. Iri igungwa rakapfuma mukati marine algae, cephalopods uye crustaceans. Kunyanya isu tinokwanisa kuwana mhando dzealgae kubva kubhuruu-bhuruu boka rinoonekwa zvakanyanya mumwaka wezhizha uye zvakare zvinobatsira kune iro ruvara rwemvura. Kuve wakadzika kudaro, iwo mavara ealgae aro ari kusarudza iyo vara richava naro kubva pane zvakawonekwa.
Oiri muGungwa Reyero
Muna 2007 pakange paine kuwanikwa neChina Oiri neGesi Corporation, CNPC. Uye ndeyekuti munda wakakosha kwazvo wemafuta unosvika mabhiriyoni matani wakawanikwa. Kuwanikwa uku kunowanikwa zvese pamahombekombe uye pasherufu yemakondinendi yeGungwa reYero. Inowanikwa mudunhu reHebei uye ine nzvimbo iyo inosvika 1570 mativi emakiromita. Zvikamu zviviri kubva muzvitatu zveiyi huwandu hwemafuta huri papuratifomu yekumahombekombe.
Mhuka nemiti yezvirimwa zviri kuwedzera sezvo isu tinosvika padyo nekumaodzanyemba kwegungwa. Apa ndipo patinowanawo huwandu hwehove hombe. Mumakore gumi apfuura, North Korea yanga ichigadzira zvombo zvenyukireya zvakasiyana pamhenderekedzo yeGungwa reYero. Nekuda kweichi chikonzero, yakatemerwa chibvumirano neUN, kunyangwe hazvo yanga isingaratidzika kunge isina basa nenyika ino yemakomunisti.
Wepamusoro mutero weGungwa Dzvuku
Tinoziva kuti gungwa iri rinodyiswa nerwizi rweYellow. Iwo mutumbi wakareba wakareba wemvura nyowani iyo inowanzoonekwa sehunhu hwebudiriro yeChina. Ndirwo rwizi rwechipiri rwakareba kupfuura mamwe ese China, kuva rwizi rwechitatu rurefu muAsia uye rwechitanhatu pakureba kupfuura pasi rese. Inozivikanwa nezita iri nekuda kwehuwandu hwesimbi iyo yaakatakura kuenda kuGungwa reYero uye ndokuipa iri vara.
Batanidza mumakomo eBayan Har pabani reTibet pakukwirira kunosvika kumamirioni mazana mana nemazana masere. Inoyerera zvisina kujeka munzira yekumabvazuva kuburikidza nemamwe mapurovhinzi eChina maChinese kusvika yadeukira muGungwa reYero. Panzvimbo ino inogadzira delta yehukuru hwakakura hunoita kuti inyatso kuzivikanwa.
Hurefu hwerwizi rwese makiromita mazana mashanu nemakumi mana nemana nemana, uye bheseni rayo rehydrographic rinofukidza nzvimbo ingangoita 5,464-750,000 km752,000. Inowanzo tenderera kuyerera ichipinda mugungwa remakiromita mazana maviri nemazana maviri neshanu neshanu pasekondi. Rakadaro ndiro bheseni raro rekugera, rinova rechitatu pakukura muChina. Nzizi shomana dzinoverengeka dzinopa mvura kurwizi urwu nguva dzose. Kana tikaongorora kosi yacho yese, tinoona kuti ine zvikamu zvitatu: yepamusoro kosi, yepakati kosi uye yepasi kosi.
Chikamu chekutanga chekosi yacho chinotanga mumakomo kuenda kuTogtoh County, kuburikidza nemakiromita anopfuura mazana mana nemazana mana. Ipapa ndipo panotsvedza payo uye panotangira kuberekwa kwayo. Iyo yepakati kosi inomhanya kubva kudunhu kuenda kuZhengzhou mudunhu reHenan. Icho chiri muchikamu chino umo chazvino chinotora zvinopfuura makumi mapfumbamwe kubva muzana zvematombo. Matombo ndiwo masarasara ejecha nedombo zvinofambiswa uye kutakurwa zvese nekugadzirisa uye nekutenderera uye kuparara. Chekupedzisira, iyo yepasi kosi inotanga kubva kuZhengzhou uye inogumira kugungwa. Nechekare muchikamu ichi chegungwa ndipo parinotakurwa nehukuru hwakanyanya hwetsvina.
Kudzidziswa uye zvipenyu zvakasiyana
Rwizi rwuri kuwana yero yero yebhuruu hue sezvo ichiyerera mukati mekambani yematani emidziyo yakasimba ine iri vara. Chikamu chevhu revhu rebani reTibetan panotanga kukwira rwizi ruri yakanyanya njodzi kukukurwa nemhepo chiito uye jecha rese rakanaka rinoshambidzwa murwizi. Kana rwizi rwakatakurwa nezvimedu zvine vara iri, zvinotakurwa uye sedimentary inopedzisira iri muGungwa reYero.
Irwizi rwusina kupfuma zvakanyanya mune zvipenyu, saka gungwa harinawo kupfuma zvakanyanya. Gungwa, sezvo rakadzika kwazvo, harigone kuchengeta huwandu hwakawanda hwemiti nemhuka. Mimwe yemhuka dzinonyanya kuzivikanwa ndeye Yangtze spoonbill uye mamwe marudzi ekapeti. Inofungidzirwa kuti muhuwandu vaigona kuwanikwa dzinenge zana nemakumi mashanu emarudzi ehove asi huwandu hwacho hudiki kwazvo nhasi. Mubheseni mune mhando dzakasiyana dzemhuka dzakadai sembada uye nondo.
Pakati peshiri dzinozivikanwa zvikuru isu tine Great Bustard, Chinese Serreta uye European Eagle. Rwizi runoshandiswa kugadzira simba remagetsi uye rakaita kuti chikamu chose chibudirire. Zvimwe chetezvo ndezvechokwadi nezvekurima hove uye hove uye dzimwe mhuka dzemumvura. Icho chimwe cheakakosha zviitiko zvehupfumi kunze kwekuburitswa kwemafuta.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu iwe unogona kudzidza zvakawanda nezve iyo Yero Gungwa uye ayo maitiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Meteorology » Ciencia » Gungwa Jena
Denda remhashu Dzinogona kudzorwa here?